Ihe kacha mma 24 okooko osisi Echiche Ebumnobi maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ogbugbu egbu egbu na-ewu ewu ma na-ewu ewu na ọdịbendị dị iche iche nke ụwa. Na omenala, egbu egbu egbu bụ maka ụmụ nwanyị. Mma okooko osisi na-anọchi anya ihe na-adabere na ifuru nke eji. Okooko osisi rose nwere ihe ọ pụtara dị ka okooko osisi ndị ọzọ nwekwara ihe ha pụtara. Ihe eji egbu egbu na Japan bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ma nwee mmetụta pụtara ìhè na ya. Okooko osisi nwere ike na-anọchi anya anụ ahụ, mmeputakwa, ọmụmụ, nkwado, nrọ, anwansi, ekele, nlekọta na ịhụnanya. Ihe nke ifuru nwere ihe jikọrọ ya na ozi ahụ na ejiji na-achọ inyefe ndị ọzọ.
A pụghị ileghara akara igbu mkpụrụ osisi anya n'ihi akara nke o nwere. Ndị mmadụ na-agbakwunye ya ugbu a site na ịbịpụta ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ihe dị na ya iji nye ha ụdị ozi pụrụ iche nke enwere ike ịpụtara maka ha. Osisi ọ bụla si na rose ruo ogige lotus nwere ihe ha pụtara. Ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị ozi ị chọrọ ịga. Ụdị ntụgharị #tattoo bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ihi ọtụtụ ihe na akara dị iche iche ha na-ekerịta gburugburu ụwa. Mgbe agbakwunyere okooko osisi, agba na ihe, ha na-egosipụta ihe dị ukwuu.
Ụdị Azụ Ụmụaka
Otú ọ dị, iji nweta egbu egbu dịka nke a, ị ga-amụta otú ị ga-esi zere ọrịa. Enwere ụzọ isi nweta ngwá dị iche iche n'ụdị ụdị ihe ọ bụla dị ka anụ ahụ na ọbara. A ga-ehichapu ihe eji eme ihe ma kpochaa ya nke ọma ka o nweere onwe ya n'aka ụdị ego ọ bụla.
Ụdị Ụdị Ụdị Ụdị
Ụfọdụ n'ime nkwụnye ego ndị a nwere ike ime ka ọtụtụ ihe mebiri emebi ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ọma. Nke a bụ ihe mere nzọụkwụ mbụ nke sterilization bụ iji kpochaa ngwá ahụ mgbe ejiri ya.
Ụdị agba na okooko osisi
O nwere ike ịbụ na ị gaghị abụ onye mbụ mgbe ị na-egbu egbu ma e nwere ihe ị nwere ike ime iji nyere onwe gị aka. Ụdị nwere ike ịdị mma ma ị ghaghị ijide n'aka na ọ bụ ihe ịchọrọ tupu ịbanye. Ụdị na-adịgide adịgide aghọwo ihe ọtụtụ ndị na-aga.
Ụdị Okpomọkụ Rose
Nzọụkwụ abụọ ga-asacha maka ihe dịka 30 sekọnd mgbe ị nụchara ma kwe ka ngwá ahụ kpochaa. A ga - etinyezi ya na obere akpa akwa. Nke a bụ ebe usoro ịmalite ịrịa ahụ.
Ụdị Mkpụrụ Eji Azụ
Otú ọ dị, a ghaghị ịgbakwunye aha nke ngwa ahụ, ụbọchị na njirimara onye ọrụ nke na-adị na obere akpa na ha, a ghaghị kachie ya nke ọma tupu ewee tinye onye ọrụ n'ime autoclave.
Ụdị Àkụkụkụ Mara mma
Ụdị Mkpụrụ Sexy Sexy
Kasị Mma Ifuru Atụmatụ
Ozi ọma ahụ bụ, n'agbanyeghị otú ị si ahụ ụdị igbu egbu, ọ bịara nọrọ. isi iyi
Ụkwụ na-egbu egbu na ụda ụkwụ
E nwere oge a na-ewere ọrụ dịka nke a dị ka onye nnupụisi. Ọ bụghị n'ihi na egbu egbu na mberede gbanwere ọtụtụ echiche na afọ. Enweghi ebe di n'uwa ka iga leta na i gaghi ahu aru. isi iyi
Ọkachasị Njiri Aka
E nwere ngwá ọrụ dị iche iche a na-eji maka inking. Ihe ọma ị nwere ike imere onwe gị mgbe ịchọrọ igbu egbu bụ ime obere nchọpụta. isi iyi
Eke egbuke egbuke
Nyocha ahụ bụ ihe ga - azọpụta gị site n'ọtụtụ nza ụta na ọdịnihu mgbe ị ga - ejedebe egbu egbu n'ahụ gị. isi iyi
Ụdị egbu osisi
Anyị anụla banyere ndị na-anwa imebi tattoos na-adịgide adịgide n'ihi na ha aghọtaghị ihe ha na-eme mgbe ha banyere. isi iyi
Back egbu egbu
Iji zere ọtụtụ ihe ngosi mgbe ọtụtụ afọ gachara igbu egbu, jide n'aka na ị na-enweta tattoos ka ị ghara ịkwa ụta na njedebe nke ụbọchị ahụ. isi iyi
Kedu ihe mbụ ị ga-eme tupu ị nweta egbu egbu? I kwesịrị ịma ụdị igbu egbu ị chọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-aghọta ihe egbugbu na-ekwu. Mgbe ị mere nke a, ị ga-achọ onye ọkachamara nke ga-enyere gị aka ịmepụta ụdị ahụ. isi iyi
Ụdị egbugbu mkpụrụ osisi
Enwere otutu ebe ị nwere ike inweta enyemaka ma a bịa n'ịhọrọ onye na-egbu egbu egbu. Ịntanetị nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọkachamara n'ịnagide ụdị ọnyà dị iche iche. Mgbe ị na-enwe ike ịgụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị a ma jụọ ajụjụ ndị dị nro banyere otu egbu egbu, ọ ga-adịrị gị mfe iji egbu egbu gị. isi iyi
Aka egbu osisi
Ntuba ntughariokpueze okpuezerip tattoosarịlịka arịlịkaaka mma akaegwu egwun'olu oluegbugbu egbugbuzodiac akara akaraegbu egbu hennaụmụnne mgbukoi ika tattooEgwu ugodi na nwunyeudara okooko osisiegbu egbu diamondegbu egbu ebighi ebiakpị akpịngwusi pusiaka akaAnkle Tattoosọnwa tattoosna-adọ aka mmaakwara obiagbụrụ eboazụ azụegbu egbu egbunnụnụndị mmụọ oziUche obimehndi imewena-egbu egbuỤdị ekpomkpaechiche egbugbuọdụm ọdụmndị na-egbuke egbukeegbu egbu mmiriegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu okpuGeometric Tattoosenyí egbu egbuaka akaima ima mmaụkwụ akaegbu egbu maka ụmụ nwokeenyi kacha mma enyiegbu egbu osisi lotusegbu egbuakara ntụpọmma tattoos